Pirate Kings™️ 7.3.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.3.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Pirate Kings™️
Pirate Kings™️ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
🏴‍☠️Attack, Steal, and Defend! - It’saPirate Kings Adventure with Friends! 🏴‍☠️
☠️Ahoy Me Hearties! Set sail in action-packed pirate games with friends!
☠️Collect coins and prizes to build your island. Stash more treasure than any other pirate!
☠️Raid your friends’ loot in this island adventure!
☠️Become the greatest captain of all while stealing bonuses and prizes from other pirates!
☠️Yo-ho! Will become the richest Pirate King master of all?
⚔️ Battle Friends for Gold and Glory to Become the Pirate King! ⚔️
🔥 Yo-ho! Invite Facebook friends to join in the fun!
🔥 Spin the wheel and steal their pirate stuff!
🔥Attack your Mateys’ islands! Take their good stuff (and coins)! - it'sapirate’s life, after all!
🔥 Defend your islands from return attacks! Become the Pirate King!
🔥 Gift coins and treasures to your mateys - who said pirates were bad?
🔥Anything goes in the most pirate-tastic of multiplayer games and building games!
🤼Steal coins from other players too! Take what your heart desires! Enjoy building games as you've never played before in Pirate Kings, the coolest coin game on the high seas!
Ahoy Mateys!7သမုဒ်ကျွမ်းကျင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား? ဘီးလည်, သင့်ပြန်ပေးလော့စုဆောင်း, သင့်ကျွန်းတည်ဆောက်လျက်လူအပေါင်းတို့၏အချမ်းသာဆုံး Pirate ရှငျဘုရငျဖွစျလာ!
အဆင်သင့် yer ပင်လယ်ခြေထောက်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတစ် swashbuckling စွန့်စားမှုအဘို့သင်္ဘောကိုတက်။ ဒီလူမှုရေး multiplayer ဂိမ်းမှာတော့တိုင်းကစားသမားတစ်ဦးပင်လယ်ဓားပြများ၏ဘဝနေထိုင်ပါတယ်။
•ဆုကြေးငွေဘီး spinning အားဖြင့်ဒင်္ဂါးပြား, တိုက်ခိုက်ရွေ့လျားနှင့်ဘဏ္ဍာကိုနဲ့တူဆုစုဆောင်းပါ။
• 2x, 5x နှင့်ပင် 10x အားဖြင့်အကြွေစေ့ဆုများပြားဖို့စူပါတိုးတက်မှုနှုန်း Hit!
•စည်းစိမ်ဥစ္စာဘို့အဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတောကျွန်းပေါ်တွင်သင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်ပင်လယ်ဓားပြ cove တည်ဆောက်။
•, ပင်လယ်ဓားပြသူငယ်ချင်းကျေးဇူးအဘို့စစ်တိုက်နှင့်အတူ Play ပင်လယ်ဓားပြများကနေလုယူနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားကျွန်းများအောင်နိုင်။
•အ Pirate မင်းကြီးသည်အရှင်ဘုရားဖြစ်လာ!
•သင့်ရဲ့ Facebook မိတ်ဆွေများအားလုံးသင့်ရဲ့ဘုနျးကွီးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာအကြောင်းကိုဝါကွှား!
NOW က ... ကျွန်း Tales မိတ်ဆက်ခြင်း!
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အစဉ်အမြဲကျွန်း Story အသက်ဝင်!
ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်က Pirate အယ်လ်ဘမ်ကိုသင် BIG Win ရန်နည်းလမ်းသစ်ဆောင်တတ်၏, သငျသညျအောင်ပွဲရန်သင့်လမ်းလည်အဖြစ်အံ့သြဖွယ်ကတ်များစုဆောင်းနှင့်သင့် Pirate အယ်လ်ဘန်တက်ဖြည့်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအယ်လ်ဘမ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြတယ်။ , ရှိသမျှကတ်တွေစုဆောင်းအယ်လ်ဘမ်ပြီးအောင်နှင့်ကြီးမားသောဆုကြေးငွေပျော်မွေ့!
ပင်လယ်ဓားပြသူခိုးတွေတစ်ပင်လယ်၌, သင်ကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏အချမ်းသာဆုံး Pirate ဘုရငျဖွစျခဲ့ပါ! သင့်ရဲ့ဆုထုတ်ဖေါ်ဖို့ဘီးတစ်ဦးချင်းစီအလှည့်လှည့်ဖျား။ သငျသညျ, သင့်ထုံးစံ-ရေးရာကျွန်း upgrade လုပ်ဖို့ကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားအနိုင်ရသင်၏မိတ်ဆွေများ '' ပင်လယ်ဓားပြကျွန်းများကိုတိုက်ခိုက်ဒါမှမဟုတ်ငွေရှငျဘုရငျကနေပြန်ပေးလော့ခိုးယူနိုင်!
•မြေကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားများတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ငွေရှငျဘုရငျလုယူဖို့ "ခိုးယူ" ပေါ်တွင်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဂိမ်း Play! ဒီ multiplayer ဂိမ်းမှာတော့ကံကြမ္မာဟာရဲရင့်! နှာ
• Facebook ကသူငယ်ချင်းများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျပန်းပင်လယ်ဓားပြများဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ။
• သတိထား! သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားနေပင်လယ်ဓားပြကျူးကျော်မှသင်၏ကျွန်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။
•တစ်ဦးအားကြီးသော Pirate အင်ပါယာတည်ဆောက်ဖို့ပိုလုယူရာအကြွေစေ့ဂိမ်း spinning Keep!
တစ်ဦး Pirate ပရဒိသု Build
Cap'n aye, အေး! မကြာခင်မှာပဲသင်သည်ရွှေရေကူးပါလိမ့်မယ်! သင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏ပရဒိသုပင်လယ်ဓားပြကျွန်းကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်းဆိုင်မှာဒင်္ဂါးပြားကိုသုံးပါ။
ဒီအဆောက်အဦဂိမ်းထဲမှာ•, ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောများ, ရဲတိုက်နှင့်အပိုငျးအနှင့်သင်၏ကျွန်း upgrade ။
•, လာမယ့်အဆင့်အထိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ထူးခြားတဲ့ themes များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကျွန်းနှင့်ကြိုတင်ဖြည့်။
• uncharted ကမ္ဘာများစွာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပင်လယ်ရေရွက်!
ဒါဟာ swashbucklin ကောင်းသောအချိန်ပဲ! Pirate ဓမ္မရာဇဝင်စွန့်စားမှုဂိမ်းထဲမှာ7သမုဒ်အောင်နိုင်!
Pirate Kings™️ အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pirate Kings™️ အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pirate Kings™️ အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Pirate Kings™️ အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.28k 3.23M
Pirate Kings™️ ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Pirate Kings™️ အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Jelly Button Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.jellybtn.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: F0:47:EA:3E:D6:0F:48:26:77:75:C4:27:45:89:1A:5F:DC:48:C9:C0
အဖွဲ့အစည်း (O): Jelly Button Games
Pirate Kings™️ APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ